Miss Myanmar International 2012 | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Entertainment » Miss Myanmar International 2012
Posted by we R one on Mar 26, 2012 in Entertainment, Photography, Society & Lifestyle, Travel | 27 comments
Second Runner Up ဆု ရှင် အေးချမ်းမိုး ရဲ့ မြန်မာ ၀တ်စုံနဲ အလှ ဖြစ်ပါတယ်. အသက် က ၁၈ နှစ် တတိယ နှစ် ဆေးကျောင်းသူ..
First Runner Up ဆုရှင် စွမ်ရည်ထက် အသက် ၁၈ နှစ် ရဲ့ မြန်မာဝတ်စုံ
First Runner Up ဆုရှင် စွမ်ရည်ထက် အသက် ၁၈ နှစ် ရဲ့ Talent ပြကွက်..
Miss Myanmar International ဆုရ နန်းခင်ဇေယျာ ရဲ မြန်မာဝတ်စုံ နဲ အလှ
ချစ်စရာ ပအို့ဝတ်စုံလေးနဲ ရှမ်းအက က ပြီး Telant ပြသနေတဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ Miss Myanmar International ရှမ်း+ ပအို့ တိုင်းရင်းသူလေး နန်းခင်ဇေယျာ
အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံနဲ လှချင်းတိုင်းလှနေသော ကျွန်မတို့ရဲ့ Miss Myanmar
Orange Lady Our Miss Myanmar International
Miss Myanmar International ရဲ့ ဘေးတစ်စောင်းအလှ
Miss Myanmar International ရဲ့ နောက်ကျော အလှ
Miss Myanmar Internatioanl
အသက်- ၂၃ နှစ်
လူမျိုး- ရှမ်း + ပအို့
အလုပ်အကိုင်- English-German Tourist Guide
ဂလု ဂလု ဂလု အားပါးပါး လွှတ်ကောင်းဗျား
ထိုနှစ်လီ မောင်ပေ သိချင်သည်။
ကိုပေအတု အစစ် သိချင်ရင်တူနဲ့ထုကြည့် (ကျောက်ကိုပြောတာပါ) အဟွတ်အဟွတ် ဒီတလောကျန်းမာရေးသိပ်မကောင်းဘူးဗျာ
အားပါး.. မြန်မာ့ဝတ်စုံလေးနဲ့ ခေးမလေးများလည်း လှသည်
အမြင်ရိုးလျှင် ရိုးရိုးလေး လှသည်ဖြစ်ပါကြောင်း
ဓါတ်ပုံထဲမှာမို့လားမသိ အပြင်မှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်က သွေးတစ်ဝက်များ ဒီ့ထက်အဆတစ်သောင်းပိုလှတယ်ဗျို့။
မယုံရင် တောင်ကြီး၊ပင်လုံ ပအို့ဝ်မျိုးစုံတဲ့နေရာတွေကြည့် သွေးတစ်ဝက်တွေပိုများတယ်
ဒီကောင်မလေးထက် အများကြီးသာတယ် ဝတ်စုံဝတ်ပြီးနာမည်တပ် လူမျိုးပျက်အောင်တော့လုပ်ကြပါနဲ့ကွယ်
ရန်ကုန်မှာ အတုများတယ် လုပ်ရှမ်းတွေလုပ်ပအို့ဝ်တွေပေါမှပေါ
ရှမ်းပြည်သားတို့မယုံပေါင်……………… သူဟာသူ Missရချင်ရ ရှမ်းပအို့ဝ်အစစ်မဟုတ်တာသေချာတယ်။
မယုံရင် ရှမ်းပြည်သာလာကြည့်တော့ရွာသားတို့ရေ ပင်လုံ၊တောင်ကြီးမှာ သူ့ထက်ချောတဲ့ရှမ်းပအို့ဝ်များပေါ
သားချောချောလေးမွေးပြီး ဟင်း……. မော်ဒယ်ဘွိုင်းလုပ်ခိုင်းပြီး Mr.Myanmar International
ပြောလို့ without ကြီးကိုဖြစ်လို့ လိုင်စင်လိုချင်တယ်အော်နေရတယ် ကိုယ်ကလည်းမပြောရဲ
သူကလည်းလာမပြော ရှမ်းပြည်သားတို့အဲလောက်သတ္တိကောင်းတာ ကောင်မလေးကလာပြော
အဆ ၁သောင်းတော့ နည်းနည်းများတယ်
racial discrimination နဲ့ နီးတယ်နော ..အဲ့ဒါ..
မစ်စ် မြန်မာဟာ မစ်စ်မြန်မာပေါ့ဗျာ..
အဆတစ်သောင်းဆိုမှတော့ ကျွန်တော်တို့တောင်ပေါ်သူတွေ မစ်ယူနီဗာ့စ်ပဲဝင်ပြိုင်ခိုင်းတော့မှာ
ပေါ့ ဒါပေမယ့်ချောတာလှတာတော့ သူ့ထက်သာတာအမှန်ပါရယ်…………
ကောင်မလေးတွေမိတ်ကပ်မလိမ်းဘာမလိမ်းနဲ့ဓါတ်ပုံတွေ ကျွန်တော် ဓါတ်ပုံဆိုင်မှာအလုပ်လုပ်
တုန်းကရိုက်ထားတာရှိတယ်ဗျ မှုန်နေအောင်ကိုလှတာ ဓါတ်ပုံစားတယ်ဆိုတာသူတို့ကိုမြင်မှပဲ
လက်တွေ့သိတယ်ဗျ အွန်လိုင်းမှာတင်ပြလိုက်ချင်တာ ဒါပေမယ့် ပိုင်ရှင်ခွင့်မပြုပဲတင်ရင်
စတီးလက်ကောက်စာမိမှာစိုးလို့ဗျ။ ခွင့်ပြုမိန့်တောင်းထားတယ် စောင့်သာကြည့်ဗျို့။
အနောက်တိုင်း ၀တ်စုံနဲ လှချင်းတိုင်းလှနေသော ကျွန်မတို့ရဲ့ Miss Myanmar က
ဂလု ဂလု အဲလောက်နဲ့ ရင်မခုန်တတ်တော့တာခက်နေတာ
ကိုရှမ်းကြီးရေ တင်ပေးခဲ့စမ်းပါဗျာ။ တစ်ဝက်စီဆိုတာကို ကြည့်ချင်လို့။ အ၀တ်အစားတော့ ပြည့်စုံပါစေနော်။ ကိုပေ ပြောသလို အစစ်တွေပဲ တင်ပေးပါဗျာ။ တအားဝါသနာပါလို့ ။ အဟီး။
မစ်စ်မြန်မာလုပ်ထားသမို့.. အဲဒါ.. နယူးယောက်က.. မစ်စ်ဆရာကြီး.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့.. ကော်ပီရိုက်နဲ့ညိနေသဗျ…
လိုဂိုဒီဇိုင်းပါ.. ဆင်ဆင်လေးဆိုတော့.. သိပ်တော့မချောင်…
ဒါမှမဟုတ်.. တရားဝင်.. မစ်ယူနီဗတ်စ်ဝင်ပြိုင်ဖို့.. မှန်းထားသလား သိချင်သား…
အခုရွေးချယ်ခံ မစ်စ်မြန်မာက.. ထွားနေ..၀နေတယ်ဗျို့…
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ဒီလိုတွေလုပ်လာတာ.. ဖြစ်လာတာကြိုဆိုပါတယ်.။
မိန်းမလှပွဲတခု..တခုက.. အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း.. သောင်းချီဖြစ်စေတာပါ..။
နိုင်ငံအတိုင်းအတာ.. ပြည်နယ်မြို့တွေ.. ခွဲထုတ်လိုက်ရင်.. သိန်းဂဏန်း အလုပ်အကိုင်တွေထွက်လာကြောင်း…။
ကိုကြောင့် စကား ငှားသုံးရရင်
ဟိုတယ် အသင်းက နေ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အထောက်အကူ အနေနဲ့ လွှတ်နိုင်အောင် ရွေးတာပါ။ မစ်ယူနီဗာစ်အတွက်မဟုတ်ပါ။
သူကြီးရေ .. ဟိုတယ် အသင်းကနေ Myanmar Tourism Service ဆိုတဲ့ ကုမ္မဏီကို အပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ့ ကုမ္မဏီကနေ တာဝန်ယူလုပ်တာပါ ။
နောက် ပြီး အထင်မလွဲပါနဲ့ .. သတင်းစာထဲ ဂျာနယ်ထဲလျှောက်လွှာခေါ်၊ လျှောက်လွှာ တစ်စောင် ငါးထောင်နဲ့ ရောင်းစား ၊ ရာချီရောင်းရတယ်လို့တော့ ပြောတာတွေ့ပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေ၊ ဟိုတယ် အသင်းတွေကို စပွန်ဆာပေးခိုင်း ၊ ပြီး သိန်းသုံးဆယ် ပထမ ရသူကိုချီးမြှင့် ။ ပုံပြင်လေးကတော့ ဒါပါဘဲမို့လို့ သူကြီးတွေးသလို ပြည်နယ်တွေ မြို့တွေ မှာ လုပ်လာပြီး ရွေးတာမဟုတ်တဲ့ အတွက် သူကြီးတွေးသလို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလန်း.. သောင်းချီဖြစ်စေတာပါ..။ မရှိပါ။
MTS ဆိုက် ကို ခုပဲ သွားကြည့်လိုက်ပါသည်..။
၂ပေ့ခ်ျလောက် ကြည့်အပြီးတွင် ပြောစရာ ၂ခု တွေ့တာနဲ့ ဆက်မကြည့်ဖြစ်ပါ…
၁။ CEO ဆိုသူ၏ ကွန်တက်ခ် မေးလ်မှာ ဂျီမေးလ်ဖြစ်နေခြင်း။
၂။ Social Responsibility တွင် ၂၀၀၉ ဇန်န၀ါရီ သည်နောက်ဆုံးဖြစ်နေခြင်း…။
မော်ဒလယ်တွေဘာတွေ အသာထားလို့ …..
အော်ဖစ်ရှယ်လ် မေးလေး ဘာလေး သုံးပါဦး..
ဟုမ်းပေ့ခ်ျလေးဘာလေး အပ္ပဒိတ် လုပ်ကြပါဦး…
ပြီးခဲ့တဲ့.. ၃-၄နှစ်လောက်က.. ယူအက်စ်က.. မစ်စ်ပွဲတခု မြန်မာပါတယ်ဆိုတာနဲ့.. သတင်းမေးယူလုပ်ဖြစ်တယ်..
အဲဒီအဖွဲ့ခေါင်းစဉ်မှာ.. .. မစ်စ်နာမယ်ကြီးပါသမို့.. ဒေါ်နယ်ထရမ့်တို့ဖက်က.. တရားစွဲတာ ..ကြားဖူးလို့ပါ…။
တကယ်တော့.. မိန်းမလှပြိုင်ပွဲတွေဟာ.. မိန်းကလေးငယ်တွေစိတ်ကို (အများကြီး)ကောင်းမွန်တိုးတက်အောင် ပြုစားနိုင်ပါတယ်..
မသိသာပါဘူး.. ဒါပေမဲ့.. အဲဒီလိုပဲလို့.. အတတ်ပြောနိုင်ပါတယ်..။
ပြောရရင်..အထည်အ၀တ်လုပ်ငန်း..ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်..။ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်း..ဓါတ်ပုံဆရာ.. နောက်ဆုံး..ကုန်ကုန်.. ခန္ဓာအလှပြုပြင်.. ဒိုင်းယက်အလုပ်..စတဲ့..ဆက်စပ်အလုပ်တွေပါ..ပိုဖြစ်တာပေါ့…
Miss America ကျဘယ်လိုလုပ်မတုန်း..
(သဂျီးတို့ အမေဒစ်ကင်န် မှာတော့ သူပိုင်ချင်ပိုင်မပေါ့..)
ကမ္ဘာမှာတော့ သည်လိုပဲ ….
common ဖြစ်တဲ့ Miss ဆိုတဲ့ စာလုံးနောက်မှာ
ကပ်ချင်ရာ ကပ်ပီး …
Miss Blah Blah Blah လုပ်နေကြတာပါပဲချင့်..
ခေါ်ဖီရွိုက် မငြိပါဘူး …
မိန်းမလှပြိုင်ပွဲတွေဟာ.. မိန်းကလေးငယ်တွေစိတ်ကို (အများကြီး)ကောင်းမွန်တိုးတက်အောင် ပြုစားနိုင်ပါတယ်..
အမြဲ မကောင်းမြင်သူတော့များကျွန်တော် ဖြစ်နေ မလားမသိ ။
ဖက်ရှင်ပြိုင်ပွဲ တစ်ခု ၀င်ဖို့ ဒီမှာ အ၀တ်အစားဖိုး ၊ မိတ်ကပ် ဓါတ်ပုံ ဘိုး ဘာညာ မတတ်နိုင်လို့ စပွန်ဆာ ရှာရသူတွေဖြစ်သွားကြတာ ပိုများတယ်လို့ ပြောသံကြားဘူးတော့ ။ ( သူကြီးရေ . ကိုယ်သိမဟုတ်ဘဲ သူများပြောတာမို့လို့ အတိအကျ မပြောရဲပါ။ကြားဘူးတာသာပြောတာလို့ ၀န်ခံပါရစေ)
အထည်အ၀တ်လုပ်ငန်း..ဒီဇိုင်းဖက်ရှင်..။ ဂျာနယ်မဂ္ဂဇင်း..ဓါတ်ပုံဆရာ.. နောက်ဆုံး..ကုန်ကုန်.. ခန္ဓာအလှပြုပြင်.. ဒိုင်းယက်အလုပ်..စတဲ့..ဆက်စပ်အလုပ်တွေပါ..ပိုဖြစ်တာပေါ့…
ပလေးဘွိုင်းမျက်နှာဖုံးလို.. ဗစ်တိုးရီးယားစီကရက်လို.. မိုဒယ်တွေဘ၀လည်း ဒီလိုပါပဲ..
ဒါဟာ.. ငယ်နုတုံးအလှကို.. ဈေးတင်ရောင်းတာသာဖြစ်ပါတယ်..။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက.. ဈေးကောင်းရကြတယ်လေ…။ ပိုကျွမ်းကျင်ရင်..မီလီယန်နာကို.. ဆွဲချိပ်ကြပေါ့…။
လမ်းဘေးမှာ.. ဘာမသိညာမသိ… စတေးခံတွေထက်ပိုကောင်းတာကတေ့ာ အမှန်..
မာစမျှစ် … မစ်စ် မြန်မာ ..
အော် .. ချစ်စရာ ပါလားကွယ် …
ငါတကော ကောပြီး ပြောရရင် ..
ကြိုက်တယ် … ခိုက်တယ် …
မောင်ခေါ်ရာ လိုက်ခဲ့ပါတော့ကွယ် …
ချစ်နှမ မစ်စ် ညီမငေးရယ် …..
အေးချမ်းမိုး မြင်ရင် ….. ဒေါ်ခင်ကြည် ရဲ့ အလုပ်အကိုင် အမေးခံရလို့ … စင်ပေါ်မှာ အကြံအိုက် နေတဲ့ ပုံ ပဲ ပြေးပြေးမြင်တယ်ဗျို့  ….။
ဒီပွဲလေးကို စိတ်ဝင်စားလို့ သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပ-ဒု-တ လေး သုံးယောက်လုံး တကယ့်ကို အရည်အချင်း ရှိကြပါတယ်။ Eng လေးတွေလည်း တကယ်ကောင်းပါတယ်- တကယ့် model လေးတွေ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့တော့ ထင်တယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့ သုံးယောက်လုံးဟာ အားလုံးထဲမှာ တော့ တကယ့်ကို မေးခွန်းပေါင်းများစွာကို ဖြေပြီး ကျန်ခဲ့ကြတဲ့သူလေးတွေမို့ ကျွန်မကတော့ အားပေးပါတယ်-
ဟုတ်တယ် ကိုMလုလင်ရေ ကျနော်လည်း အေးချမ်းမိုးဆို အဲဒီအကြောင်းပဲမြင်မိတော့တယ်ဗျာ
အခုလို မြန်မာဆန်ဆန်ဝတ်ပြီး အဲလိုအသိပညာမရှိတော့လည်း ပေါက်ပန်းလိုဖြစ်နေပါကြောင်း အမြင်သာလှတယ် ရနံ့ကမရှိဘူး
အဲလောက် တော့ ပြောပါနဲ့ဗျာ …. ခမျာ သနားပါတယ်။ ဟိဟိ
ကို The Winner ရယ်ဟုတ်ရောဟုတ်လို့လား ကျနော်သိတဲ့မော်ဒယ်အေးချမ်းမိုးကတော့
တစ်ခါပြိုင်ပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဇနီးနံမည်ရယ် အလုပ်အကိုင်ရယ်မေးတာ ဘာမှမဖြေနိုင်ဘူးဗျ နံမည်တူတာများလား ကျနော်ထင်တာတော့ ဒီကောင်မလေးပါပဲ
နန်းခင်ဇေယျာ က တော့ ထိုက်ထိုက်တန်တန် ရသွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်…။ နိုနိုကေ ဆိုရင် ဘာအပြစ်မှ ပြောစရာမရှိအောင် အရည်အချင်း ရော ရုပ်ရည်ရော ပြည့်စုံပေမဲ့. ဘာသာစကား အားနည်းချက်ကြောင့် အဆင် ၁၁ ယောက် မှာပဲ ကျန်ခဲ့တာလို့ထင်ပါတယ်..။ ကျွန်မ က တော့ နိုနိုကေ နှင့် နန်းခင်ဇေယျာ ကို တော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ..။ သဒ္ဒါကြည်ဖြူဆိုတဲ့ တစ်ယောက်လည်း မဆိုးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ သိပ်တော့မလှဘူး.။ တစ်ချို့တွေ ဆိုရင် ရုပ်ရည်ရှိပေမဲ့ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေ ကိုတောင် မဖြေနိုင်ကြဘူ..။မြန်မာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနာမည် ၊ အာစီယံ ရဲ့ အရှည် နာမည် တွေကို မသိတာ က တော့ တော်တော် ညံသွားပြီးလို့ထင်တယ်..။ Listening အားနည်းတာလည်း ဖြစ်နိုင်မယ် ထင်ပါတယ်…။ နန်းခင်ဇေယျာ က Tourist Guide ဆိုတော့ မေးခွန်းတွေ က သူ့အတွက်လွယ်ကူကောင်းလွယ်ကူ နိုင်ပါတယ်..။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် နိုနိုကေ အတွက် စိတ်မကောင်းပေမဲ့ နန်းခင်ဇေယျာ အတွက်တော့ ၀မ်းသာပါတယ်..။